Ukuze ubuke bonke abangu-100, ukuzizwa phezulu, lokhu kuzomele ukwazi ukuhlela impilo yakho ukuze uphile kalula, ngokuvumelana nawe nabanye.
Azikho ubunzima kulokhu, kubalulekile ukuba wenze umzamo omncane ukuze uphume endleleni eya empumelelweni.
Ukubonisa esibukweni kuhlale kujabulise, ngoba ubuhle kufanele bulandele njalo futhi busebenze ekupheleleni kwayo. Ubudala abukhathali, 20 kuwe noma 50, kufanele uhlale uhlelwe kahle.
Ukuziqaphela, awudingi ukutshalwa kwemali okukhulu, isikhathi namandla. Udinga nje ukuthatha umkhuba wokunaka ukubukeka kwakho ngemizuzu engu-10-15 nje ekuseni nakusihlwa. Futhi ungakwazi ngisho ukuhlanganisa okuthakazelisayo okuwusizo - i-mask enomsoco ebusweni bakho ngeke ikuvimbele ekubukeni uhlelo lwakho oluthandayo, nokugeza kwezinyawo nentombi yakho efonini.
Kubalulekile ukunakekela isikhumba. Uma unakekela kahle ikhanda, unganciphisa kalula iminyaka yobufazi iminyaka embalwa. Ukuze ubushelelezi besikhumba udinga ukunamathela emithethweni embalwa elula - ungalala nobuso obungavuthiwe ebusweni bakho. I-make-up kufanele ihlanzwe, sebenzisa ukhilimu wobusuku obuswakama isikhumba esikhumbeni. Okungenani kanye ngesonto ukwenza ukucubungula, kanye kanye ngenyanga ukuhlanza ubuso. Ukuhlanzwa kobuso kufanele kwenziwe nge-cosmetologist yezobuchwepheshe. Ngokuvamile kunconywa ukwenza amasiki ebuso, ngaleyo ndlela inondla futhi ifinyelele isikhumba. Jabulela ekuvakaseleni ubuhle be-salon - manicure, pedicure - owesifazane weqiniso ubukele isimo sezipikili hhayi ngamaholide kuphela, kodwa njalo. Uma ungenayo imali eyanele yalezo zinqubo, ungazenza wena ekhaya - ngeke kuthathe isikhathi esiningi, kodwa uzohlale ubheka okuhle. Isibopho sezinwele, iqiniso, kubalulekile ukuzinikezela ochwepheshe.
Ungakhohlwa ukulandela isibalo. Ungathenga izikali eziphansi ukuze ulawule isisindo sakho. Isisindo esiningi - hlaziya ukudla kwakho, uzibeke kumnandi, uphuze, uthosiwe, ungafaki utshwala, futhi akukho amakhilogremu angaphezulu. Ukuvivinya umzimba ekuseni.
Njalo zama ukuvuselela ikhabethe. Uma unemali etholakalayo, qhubeka unake ama-innovative fashion yakamuva. Isizini entsha zama ukuhlangabezana nento entsha. Ekhabethe elikhethiwe kahle, izinto kulula ukuzihlanganisa, ngakho-ke uma uthenga into entsha, cabanga kusengaphambili lokho oyokugqoka. Izikebhe - yilo isisekelo sakhiwo, kufanele sibe ngekhwalithi eliphezulu, ngoba izicathulo ezinjalo akusizi isihawu sokukhokha kahle.
Lezi zeluleko eziwusizo zamantombazane zizosiza ukuguqula owesifazane olula ube yindoda yangempela:
Ungacabangi ngokushiyeka, qaphela izici zakho, lo ngumyalo oyinhloko.
Shiya indlu kaningi, ngoba izwe ngaphandle kwekhaya ligcwele izinto eziningi ezithakazelisayo, thola umhlaba ngezindlela ezintsha bese wabelana ngokutholakala nabathandekayo bakho, abangani bakho.
Ukuze owesifazane weqiniso, kubalulekile ukwazi ukulalela, ukuhlonipha imibono yabanye, ngaphandle kokuzibophezela.
Udinga ukuthola iphunga lakho, iphunga lawo ngamafutha akho, futhi uthembeke kulo, ngoba iphunga lihlale lihlotshaniswa nomuntu.
Buka amashiya akho. Kungcono ukubanikeza ochwepheshe.
Shintsha ngokukhululekile, silwela ukuthuthukiswa, ubheke phambili. Sesha wena, uzame. Umuntu ofanelekayo uhlale ethakazelisa kunoma yimuphi umuntu.
Thatha isithakazelo esikhulu. Isibonelo, funda ukugibela amahhashi, noma ugibele nge-parachute, abantu bahlale bephupha ngokuba nentombazane enhle.
Buka ukuthi uhamba kanjani, i-gait kufanele ibe yowesifazane futhi ilula. Akudingekile ukuba ubuke izinyawo lapho uhamba, kusukela kulokhu kubonakala sengathi uguqa.
Funda okuningi, nomuntu ofundwa kahle kuyathandeka ukuxhumana.
Yidla ngesidlo, ukudla okudla kufanele kube kuhle.
Yiba ne-recipient yakho iresiphi ongamangala ngayo othandekayo wakho nabathandekayo nganoma isiphi isikhathi.
Lawula imizwelo, zigcine wena noma yiziphi izimo ezicindezelayo, ungaphakamiseli izwi lakho. Ubumnene obucasulayo.
Uthando lokunikeza izipho njengawo, nje ngenxa yesimo esihle.
Landela izinwele, ukuxilongwa okuyinkimbinkimbi nje ngenxa yezenzakalo ezibucayi, izinwele kufanele zigele, kuleyo ndlela ofuna ukuyithinta.
Zizwa isilinganiso, izingubo kufanele zibe ngo-sexy, hhayi ezihlambalaza.
Amantombazane acasulwa lapho intombazane ibonisa ukuhlakanipha kwayo, isebenzisa izingcaphuno ngomusho. Ngakho ungahlakaniphile.
Khumbula mayelana nokugcoba, isandla esilungisiwe kahle kunoma yimuphi umuntu ngeke ufune ukuyeka.
Ukumomotheka kuyisici esiyinhloko salona wesifazane, ake wonke umuntu azi ukuthi ujabule kangakanani.
Ungafaki izesekeli, noma ngabe ungebheji, vumela kube mncane.
Ungangitsheli ngawe, ake labo abanesithakazelo empilweni yakho bazibuze.
Uma ukhuluma nomuntu, ubheke ngokuqondile emehlweni, noma ubani uyojabula.
Udinga ukukwazi ukuzihleka, umuntu onomqondo ohlekayo uyadonsela.
Khumbula izinsuku zokuzalwa zazo zonke izihlobo nezihlobo, kubaluleke kakhulu ukuhalalisela umuntu ngesikhathi.
Ungalahleki ukuthi ubukeka kanjani kulo mzuzu, phumula futhi ujabule.
Ukuhawukela kubi. Thokoza ukuthi unayo.
Namathela kwisitayela esithile sokugqoka. Yiba ngabanye, kodwa ungakhohlwa mayelana nencazelo yegolide.
Yithande umzimba wakho, uyifake, uthathe ukugeza okugcoba ngamafutha anamakha kanye nosawoti olwandle, isikhumba sizoba bushelelezi, futhi uzokuthanda nakakhulu.
Ukuziphatha ngokweqile kuyasiza intombazane, zama ukuhlale unamathele ekuhlonipheni nabantu abangabazi.
Zisebenzise ngokunenzuzo isikhathi sakho samahhala.
Thuthukisa amakhono akho.
Ungalokothi unflatteringly ungakhulumi ngamadoda wangaphambili.
Ungakhohlisi, kuzocima izimo ezihlazo.
Ungaphuzi utshwala, intombazane ephuzile iyinto enengekayo kakhulu.
Yiba ngokwemvelo futhi ngokushesha.
Izimonyo kufanele zibe ubuncane.
Gcizelela ubuhle, uma unemilenze ende - ugqoka ama-jeans aqinile, isikhumba esihle, izinwele ezide - amakhemikhali akusikho kuwe.
Imibala yokuthetheka yintombazane.
Ungesabi ubunzima, benza umuntu aqine.
Yiba wena - othandekayo, othandekayo, othandekayo.
Vumela lawa macebiso awusizo - izimfihlo ezincane kukusiza ukuba ufinyelele okufunayo empilweni. Kholelwa kuwe.
Ungaphila ngokuthula nomamazala wakho
Ukucindezeleka: izindlela zokuphuma ekucindezelekeni
Njengowesifazane ukuthatha ingane yomunye umuntu
Indlela yokubhubhisa ubuhlobo
Indlela yokujabulisa indoda: Iseluleko se-TOP-7 esivela kunomqondo wezengqondo wesifazane
Indlela yokuxhumana nomuntu onenkani kakhulu?
Ubuholi bomdabu buyinto yesibili injabulo noma inkathazo yonke impilo?
I-Origami dragon enezandla
Ngokuvamile, ukwesaba kuvela ekungazini - lokhu kuqinisekiswa kuwe nganoma isiphi isazi sezinqondo
Imikhiqizo engaphenduliwe: ingabe imlimaza ngempela?
Ubuhle ngaphandle kokwehliswa: imikhiqizo ye-TOP-3 yobuhle yesithombe seholide
UVeveni Feofilaktov wayemangalelwa ngokuqasha izimbali
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane ezinyangeni ezingu-5
Imiphi imibuzo akufanele ibuzwe indoda?
Uma umuntu eqaqa ngabanye besifazane
Isobho seMexico saseMexico
Okudingayo ukwenza nsuku zonke ukuze ulondoloze impilo yakho
Umthelela wokuhlukanisa izingane